Xiaomi Mi TV 4A 43 လက်မ TV (WiFi, 1080P, Android OS, 2GB RAM) မှစျေးနှုန်းသည် ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » Xiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို)
အစဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုနှင့်အသံ technique ကိုTV နဲ့ TV ကို set ကို-top boxXiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို)
Xiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို)
လိုချင်သောစာရင်းသို့ထည့်သွင်းပါလိုချင်သောစာရင်းမှ Addedလိုချင်သောစာရင်းထဲကနေဖယ်ရှား 0
နောက်ဆုံးဇန်နဝါရီလ 2020, 24 တွင် 7:12 pm တွင် updated
Xiaomi က Mi L32M5 - AZ တီဗီ 4
မူရင်း Xiaomi က Mi တီဗီ 4
Xiaomi က465 4K လက်မစမတ်တီဗီ
Xiaomi က Mi တီဗီ4| အနက်ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် | ဒါဟာတက Worth လား?
ОБЗОРТЕЛЕВИЗОРА Xiaomi က Mi တီဗီ443 - НАСТРОЙКА, ТЕСТЫ, ПРОГРАММЫ
Обзор 4K телевизора Xiaomi က Mi တီဗီ4(43, 49 55 дюймови)
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: Xiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို)
1 မူရင်း Xiaomi က Mi တီဗီ 4, 1 x ကိုပါဝါလိုင်း x
Xiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို) ဗီဒီယိုများ
အဘို့အ9ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Xiaomi က Mi တီဗီ443 လက်မတီဗီ (Wi-Fi 1080P, Android OS, 2GB RAM ကို)
ဆာဂေး - 2019 10 ဇွန်
1 ။ Купилтаккакэтовысокогокачествакартинкаот Xiaomi ကинизкаяцена!2။ Встроенныйандроид3။ Встроенный wifi и usb4 ။ Лёгкийвес5။ Качественныйзвук6стерео။ Лёгкаяустановкакакнастолтакинастену.Полныйобзоритестысмотритенанашемютубканаленаписаввстрокупоиска: СергейиВаляГрачёвыилитутссылкунавидеосмотритеприкреплённую။ Всегдарадыхорошимлюдям။ Затакиеденьгинекчемупридраться!
ဗစ်တာ - 2019 10 ဇွန်
Оченьрадсвоемувыборуданноймоделителевизора။ Подходитдлятех, ктолюбитсмотретьвсёчерезинтернет။ Качествосборкиотличное။ Сделанокрепко, безлифтов။ Картинкаизумительная။ Оченьудобныйреалистичныйпульт။ Внимание! Даннаямодельориентированапреждевсегодля IPTV ။ Минус: естьмногорекламынакитайскомязыке။ Огромныйплюсвтом, чтоможнообойтисьбезпокупкиприставки, установивосновныебесплатныесервисыдляпросмотрафильмовитвпосредствомфлешки (APK ကိုфайлы) ။ Однозначномогурекомендоватьэтумодельзакачествоизображения!
kado - 2019 10 ဇွန်
အရည်အသွေး, အမြန်နှုန်း, တုံ့ပြန်မှုသည်ဝေးလံသောကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်, ကွန်နက်ရှင်မြန်နှုန်းနှင့်အရည်အသွေး Build, အထုပ်ကောင်းပါတယ်ဘယ်နှစ်ဆ box ကိုနှင့်တကွကြွလာတီဗီဂိမ်း / PC ကိုသို့မဟုတ်, Xbox သို့မဟုတ် PS4 အဘယ်ကြောင့်မပေးဘို့ကောင်းလှ၏, သင်တို့ကိုလည်းအချို့လမ်းညွှန်များစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်လျှင်, သင်လုပ်နိုင်သည် ကြီးမြတ်သည်နှင့်ငါသည်ဤရုပ်မြင်သံကြား get ဖို့ဆုံးဖြတ်အဘယ်ကြောင့်ယေဘုယျအကြောင်းရင်းထဲမှာအချို့ရှိ Chineese အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်လမ်းမရှိလိမ့်မည်ယုံကြည်ဘယ် app တွေအများကြီး, အခြားစာသားဘာမျှ install
Евгений - 2019 10 ဇွန်
1 ။ Цена2။ Хороший LG ကэкран။3။ Много4портов။ Хорошаясборка။ (Качественная) Советуюкпокупке 1 ။ စျေး2။ ကောင်းသော LG ကမျက်နှာပြင်။3။ အတော်များများကဆိပ်ကမ်းများ4။ ကောင်းသောတည်ဆောက်။ (အရည်အသွေး) ကိုဝယ်ယူ 1 ိုအကြောင်းကြားပါ။ Китайскаяпрошивка။2။ Отсутствуетголосовоеуправление။ 1 ။ တရုတ် firmware ကို။2။ အဘယ်သူမျှမစကားသံကိုထိန်းချုပ်ရှိပါသည်။
သင့်ရဲ့ခဲ့သည် Rating rate ...စုံလင်သောကောင်းသောပျမ်းမျှကမဆိုးအလွန်ညံ့ဖျင်း
ACEPC AK1 Mini ကိုကွန်ပျူတာ
MAGICSEE N5 Android တီဗွီ box ကိုနောက်ဆက်တွဲ
Z83II Mini ကိုကွန်ပျူတာ
Xiaomi က Mi-top Box လေးကို TV Box ကို (2GB 8GB RAM ကို + ROM ကို)
တီဗီ Receiver Beelink GT1 (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
တီဗီ Receiver Alfawise H96 Pro ကို + (3GB 32GB RAM ကို + ROM ကို)
Huawei Honor Band4စမတ်အားကစားလက်ပတ်နာရီ
Qiyi Warrior Rubik ရဲ့ Cube
JMGO လုပ် SA က Ultra Short ပစ် 2500 ANSI Lumens လေဆာ Projector
HTI HT - 102 အန်းဒရွိုက်မိုဘိုင်းဖုန်း Thermal Imaging က - က Black
Degumming Pneumatic ရော်ဘာတုရုမြို့ကွိဘီးပိုလန် Tool ကို - အဝါရောင်ပျား
Creality3D CR - က Black အီးယူ Plug - X ကိုလျင်မြန်စွာ 3D ပရင်တာ 300 300 က x x ကို 400mm စည်းဝေး
White က - ဝါသနာရှင်အေး Bilikay Mini ကိုလေတပ်သန့် humidifier
fengmi 4K လေဆာ Projector (Xiaomi ကဂေဟစနစ်ကုန်ပစ္စည်း) - ကြေးမုံက Black
ပလက်တီနမ်ဘရောင်းပြောင်းလဲမည် - AKKO 3068 စက်မှု Keyboard ကိုချယ်ရီ 68 Retro သော့ချက်များ Switch
Tbao T15 15.6 က IPS လက်မအိတ်ဆောင် Touch ကိုမျက်နှာပြင်ု့ကပ်ရေး - ဘက်ထရီ / Touch ကိုဖန်သားပြင်နှင့်အတူအနက်ရောင်အီးယူ Plug /
CHUWI AeroBook Laptop ကို - Grey က
Tenpigiau.lt © 2017-2019m ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်လိပ်စာ: [အီးမေးလျ protected]